कोरोना ले नेपालमा आज ९ जनाको ज्यान गयो, यी जिल्लाका हुन् मृ’तक..
October 12, 2020 712
नेपालमा कोरोना भाइर’सबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ६ सय ४५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९ जनाको मृ’त्यु भएसँगै मृ’तकको संख्या ६ सय ४५ पुगे’को हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेश १ को सुनसरीमा ३७, ८९ र ९० वर्षीय पुरुषको मृ’त्यु भएको छ ।
यस्तै, वागमती प्रदेशको काठमाडौंमा ७१ वर्षीया महिला र ६३ र ६७ वर्षीय पुरुषको ज्या:न गएको छ । उता, ललि’तपुरमा ५० वर्षीय पुरुष र चितवनमा ४० वर्षीया महि’लाको कोरोना संक्रमणबाट मृ’त्यु भएको छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा ७४ वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ । मृत’क बढीरहँदा संक्र’मित हुनेबाट मृत्युको प्रतिशत ० दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको खबर न्युज२४ नेपालमा खबर छ ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १ हजार ४ सय ७३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा:लयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट १ हजार ४ सय ७३ जना निको हुँदा डिस्चा’र्ज हुनेहरुको कुल संख्या ७७ हजार २ सय ७७ पुगेको छ । निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल ६९ दशम:लव १२ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितह’रुको संख्या ३३ हजार ८ सय ८० रहेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ४ हजार ८ सय ३१ रहेको छ । यस्तै होम आइसो’लेसनमा रहनेको सं’ख्या १९ हजार ९ सय ५२ रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा १३ हजार ९ सय २३ जना छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टा’मा देशभर १४ हजार ५ सय ३० जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल ११ लाख ९१ हजार ५ सय १४ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
Prevआज फेरि ह्वात्तै बढे संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
Nextदुखद खबर: दशैको मुखैमा बहिनी भेट्न जाँदै गरेका दाजु’को बिच बाटो’मै गयो ज्यान
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, आज तोलाको पुग्यो ? हेर्नुहोस्…
घट्यो आज पनि सुनको भाउ, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
भारत सिमाना कास्मिरमा फेरी अर्का नेपाली गोर्खा सैनिकले गुमाए ज्यान !
समयमै उपचार नपाउँदा २४ वर्षको यात्रा टुंगियो, मृत`क श्रीमतीलाई सम्झेर लेखे भावुक पत्र